ရင်သား ခွဲစိတ်ကုသခံ သမီးလေ နန်းဆိုင်လူ အတွက် အလှူငွေပေးပို့လှူဒါန်း – Lawkathuta
ရင်သား ခွဲစိတ်ကုသခံ သမီးလေ နန်းဆိုင်လူ အတွက် အလှူငွေပေးပို့လှူဒါန်း
ပြည်တွင်းသတင်း April 11, 2018
ရင်သားအပေါ် ဟော်မုန်းသက်ရောက်ပြီး အဆမတန်ကြီးမားခဲ့တာကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရတဲ့ အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် နန်းဆိုင်လူအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့နေ စေတနာရှင်တစ်ဦးက အလှူငွေ ကျပ်(၁)သိန်း ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအလှူငွေကို သီပေါမြို့နယ်စာရေးဆရာအသင်းက ဧပြီ(၁)ရက်က သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ရာ နန်းဆိုင်လူကိုယ်စား ဆေးရုံအုပ်ကြီးကလက်ခံယူပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြန် လည်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုအခါမှာ နန်းဆိုင်လူရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ ကောင်းမွန်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။
နန်းဆိုင်လူဟာ အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ရင်သားနှစ်ဖက်အဆမတန်ကြီးမားခဲ့ရပြီး အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ရောက်ချိန်မှာတော့ ရင်သားတွေဟာ တစ်ဖက်ကို (၂၂) ပေါင်အထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီ(၉)ရက်မှာတော့ သီပေါဆေးရုံအုပ်နဲ့အဖွဲ့က အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရငျသား ခှဲစိတျကုသခံမိနျးကလေးကို အလှူငှပေေးပို့လှူဒါနျး
ရငျသားအပျေါ ဟျောမုနျးသကျရောကျပွီး အဆမတနျကွီးမားခဲ့တာကွောငျ့ ခှဲစိတျကုသမှုခံယူရတဲ့ အသကျ(၁၃)နှဈအရှယျ မိနျးကလေးငယျ နနျးဆိုငျလူအတှကျ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး တာခြီလိတျမွို့နေ စတေနာရှငျတဈဦးက အလှူငှေ ကပျြ(၁)သိနျး ပေးပို့လှူဒါနျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲဒီအလှူငှကေို သီပေါမွို့နယျစာရေးဆရာအသငျးက ဧပွီ(၁)ရကျက သှားရောကျလှူဒါနျးပေးခဲ့ရာ နနျးဆိုငျလူကိုယျစား ဆေးရုံအုပျကွီးကလကျခံယူပွီး ကြေးဇူးတငျစကား ပွနျ လညျပွောကွားပေးခဲ့ပါတယျ။
အခုအခါမှာ နနျးဆိုငျလူရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနဟော ကောငျးမှနျနပွေီလို့ သိရပါတယျ။
နနျးဆိုငျလူဟာ အသကျ(၁၁)နှဈအရှယျကတညျးက ရငျသားနှဈဖကျအဆမတနျကွီးမားခဲ့ရပွီး အသကျ(၁၃)နှဈအရှယျရောကျခြိနျမှာတော့ ရငျသားတှဟော တဈဖကျကို (၂၂) ပေါငျအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ဧပွီ(၉)ရကျမှာတော့ သီပေါဆေးရုံအုပျနဲ့အဖှဲ့က အောငျမွငျစှာ ခှဲစိတျကုသနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ခွဲစိတ်ပြီးသွားသောသမီးလေး နန်းဆိုင်လူအတွက်အလှူ ရှင် များမှသမီးလေးအတွက်လှူ ဒါန်းပေးထားသောအလှူ ငွေ
အလှူ ရှင်နှင့်အလှူ ငွေများမှာ-
အလှူ ငွေ-20000ကျ ပ်
ကိုကြည်မျိုးထွန်း(ရန်ကုန်)
ဒေါ်ဖြူ ဖြူ ခိုင်(မြို့ လယ်ရပ်)
မချို အိအိစံ(ပန်းတိမ်တောင်)
အလှူ ငွေ-50000ကျ ပ်
*ထိုင်ဝမ်*မှလှူ ရှင်များ
ဒေါ်ချို ချို စန်း(မိသားစု)ထိုင်ဝမ်
ဦးဒေးဗစ်+ဒေါ်စံဂျုး(ထိုင်ဝမ်)
အလှူ ငွေ-30000ကျ ပ်
အလှူ ငွေများမှာ(၉၆၁၅၀၀ိ/)
ရရှိသောအလှူ ငွေများကိုသမီးလေးနန်းဆိုင်လူ၏ရှေ့ရေးအတွက်လိုအပ်သည်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စက်ချုပ်စက်တစ်လုံးကိုလည်း အလှူ ခံရ ရှိထားပါသည်။
Credit – Shar Htat Paing
ခှဲစိတျပွီးသှားသောသမီးလေး နနျးဆိုငျလူအတှကျအလှူ ရှငျ မြားမှသမီးလေးအတှကျလှူ ဒါနျးပေးထားသောအလှူ ငှေ
အလှူ ရှငျနှငျ့အလှူ ငှမြေားမှာ-
အလှူ ငှေ-20000ကြ ပျ
ကိုကွညျမြိုးထှနျး(ရနျကုနျ)
ဒျေါဖွူ ဖွူ ခိုငျ(မွို့ လယျရပျ)
မခြို အိအိစံ(ပနျးတိမျတောငျ)
အလှူ ငှေ-50000ကြ ပျ
*ထိုငျဝမျ*မှလှူ ရှငျမြား
ဒျေါခြို ခြို စနျး(မိသားစု)ထိုငျဝမျ
ဦးဒေးဗဈ+ဒျေါစံဂြုး(ထိုငျဝမျ)
အလှူ ငှေ-30000ကြ ပျ
အလှူ ငှမြေားမှာ(၉၆၁၅၀၀ိ/)
ရရှိသောအလှူ ငှမြေားကိုသမီးလေးနနျးဆိုငျလူ၏ရှရေ့ေးအတှကျလိုအပျသညျမြားကိုအတကျနိုငျဆုံးကူညီပေးနိုငျရနျစီစဉျဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
စကျခြုပျစကျတဈလုံးကိုလညျး အလှူ ခံရ ရှိထားပါသညျ။
အဆိုးရွားဆုံးကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင် ဖြစ်တဲ့ ဒီကလေးရဲ့ ကိုရင်ဝတ်ချင်တဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒလေး ပြည့်ဝ သွားပါပြီ။
အဆိုးရွားဆုံးကျောက်ကပ်ဝေဒနာခံစားနေရပြီးဖြစ်တဲ့ ကလေးရဲ့ကိုရင်ဝတ်ချင်တဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒလေး ပြည့် သွားပါပြီး စဉ့်ကူးမြို့နယ် လက်ပန်လှကျေးရွာ မဟာစည်ရိပ်သာ တွင် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင် မောင်ခိုင်ဇော်ထက် ဘဝမှ ရှင်ကုမာရ ကုိရင်လေး ဘဝ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ရှင်ကုမာရ ရဲ့ ကိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအတွက်လှူဒါန်းပေး ကြပါသော မိတ်ဆွေများ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါသည်။ …
ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ငှက္ကတောင် ကျေးရွာ၌ ဗုံးသီးဟောင်း တစ်လုံးတွေ့ရှိ 13-2-2018 မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ငှက္ကတောင်ကျေးရွာ၊ ရွာလယ်ပိုင်းနေ ဦးခိုင်မိုးဝင်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ မိနစ် ၅ဝ ခန့်တွင် ၎င်း၏ နေအိမ် ခြံဝင်းအတွင်း အိမ်ဆောက်ရန် …
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ခြံဝင်းထဲမှာ “ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး ဆွေးနွေးပွဲ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခု ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေတုန်းကလည်း အလားတူ …
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်အင်္ဂတေရုပ်ပြောင်းသွားသည့် ကိစ္စ
ကသာမြို့က ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အကြောင်း နောက်ဆုံးသိသမျှ…. ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အကြောင်းဝိုင်းမေးကြတော့… နောက်ဆုံးသိသမျှ ပြောပြရပါတော့မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်(၃၀)ခန့်ရှိပါတယ်။ အရုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒအများဆုံးရှိကြတာက မြင်းစီးကြေးရုပ်ပါ..။သို့သော် …. မြင်းစီးကြေးရုပ်အတွက် အလှူငွေကမလုံလောက်ဖြစ်နေတော့ နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာ ကော်မတီဝင်တွေ မဲခွဲကြပါတယ်။ အဲဒီမဲခွဲပွဲမှာ . . . စာရေးဆရာအဲငြိမ်းသာ က ကြေးရုပ် ဖြစ်ပြီး …
ကြားသိရသူတိုင်း အသဲခိုက်စေတဲ့ လပွတ္တာမှ လူသားမဆန်သော ထိတ်လန့်စရာ နှိပ်စက်မှုကြီး
လပွတ္တာမှလူသားမဆန်သော ထိတ်လန့်စရာ နှိပ်စက်မှုကြီး တာဝန်ရှိရဲတပ်သားအချို့၏လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီး ” အပိုင်း(2) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးပြည်သူယုံအောင်ဖြေရှင်းပေးပါ။ လပွတ္တာမြို့နယ်ပြင်စလူတိုက်နယ်ဒေါင်ချောင်းကျေးရွာရှိဆဒါင်းချောင်းကျေးရွာနေဦးချစ်ခင်ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သန်(ယခင်နာဂစ်ဝေချမ်းရေးအိမ်)မှာရွှေငွေပစ္စည်းသိန်း(400)ကျော်ဖောက်ထွင်ခိုးယူမှု2018)ခု(1)လပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲကအခင်းဖြစ်အိမ်နဲ့အိမ်ခြင်းကပ်နေထိုင်သူကိုခင်မောင်လတ်(36)နှစ်ကို(21.2.18)မှာပိုးလောင်းရဲစခန်းကလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ခေါ်သွားခဲ့ကြောင်း၎င်းအိမ်ဖောက်ထွင်းသည်အချိန်တွင်ကိုခင်မောင်လတ်မှာငါးသလောက်ပိုက်သွားထောင်နေဤဘာမျှမသိကြောင်းအိမ်မှာလူရှိလျှက်နှင့်ဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း။ ကိုခင်မောင်လတ်အတွက်အရှင်လတ်လတ်ငရဲကျချိန် ****************** ကိုခင်မောင်လတ်ပိုးလောင်းရဲစခန်းရောက်တော့လက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်လျှက်နဲ့ထုတ်တန်းမှာဆွဲပြီးစစ်ဆေးကြောင်းရဲတပ်သားပြည့်ဖြိုးအောင်၊ဖိုးပြည့်၊သူရိန်ဦးတို့ကပါးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရိုက်နက်မှုကြောင်မျက်နှာယောင်ကိုင်းသွားပြီးနားမကြားရတော့ကြောင်းမိမိအနေဖြင့်ဘာမှမသိရသဖြင့်ဘာမှဝံမခံဘဲညင်းခဲ့သေးကြောင်း၊…. ပုဆိုးချွတ်ပြီးထိတ်တုံးခတ်ပြီးဂွေးကိုကြိုးချီပြီးထုတ်တန်းမှာချီထားပြီးစီးကရက်ဆေးလိပ်မီးနဲ့တစ်ဗူးကုန်သည်အထိ(3)နာရီကြာတို့ခဲ့ကြောင်းရေသန်ဗူးခွံ့ကိုမီးရှို့ပြီးပလပ်စတစ်ပျော်ရည်ပူများနှင့်ခါးနှင်ပေါင်ရင်းတိုကို့ပက်သည့်အခါမိမိသေသွားတာကမှကောင်းသေးတယ်လို့ခံစားရပြီးခိုးပါတယ်ဟုဝန်ခံပြီးမောင်စိုးမြတ်အောင်နဲ့အတူလုပ်ကြောင်းပြောလိုက်ကြောင်း။ မိမိအားထိုသို့နှိမ်စက်နေချိန်တွင်ပစ္စည်းပျောက်ပိုင်ရှင်ဦးချစ်ခင်ဒေါယဉ်ယဉ်သန့်တို့၏သားကျော်သီဟ(ရဲတပ်ဖွဲ့ဟောင်း)ကထိုင့်ကြည့်နေကြောင်းရဲအလုပ်ရဲလုပ်တာကွဟုပြောကြောင်း၊ထိုသိုနှိမ်စက်မှုကိုစခန်းမှူးကသိပေမဲ့မတားဘဲရှောင်နေကြောင်း။ ကိုခင်မောင်လတ်ငရဲခန်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပုံ ******************** ကိုခင်မောင်လတ်ကခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူအိမ်တိုင်ရင်းမှာမြှတ်ထားကြောင်းရဲတွေကိုညာပြောလိုက်တယ်ရဲကအဟုတ်မှတ်ပြီးသူနဲ့မောင်စိုးမြတ်အောင်ကိုရွာခေါ်သွာတယ်အိမ်ရောက်တောရဲတွေကတိုင်ခြေမှာရှာတာမတွေ့တောကြောင်သွားကြတယ်။ သူလဲသူ့မိန်းမနဲ့ခဏတွေ့ပါရစေဆိုပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားပြီရွာလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုအောင်ကိုလတ်နဲ့ကိုမျိုးတိုကိုအမြန်ခေါ်ပြီးသူပုဆိုးချွတ်ပြပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်ကြပါဗျာလို့အကူအညီးတောင်းခဲ့ကြောင်း၊ဒေါင်ချောင်းဆရာတော်ကိုလဲအကူအညီတောင်းခဲ့ကြောင်း၊ မောင်စိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဖခင်ဦးပဉ္ဇင်းကြီးကိုလည်းလှိုင်းဘုန်းကျေးရွာအထိသွားဖမ်းခဲ့ကြကြောင်း၊ ဒေါင့်ချောင်းဆရာတော်ဦးပဏ္ဏဝကရဲစခန်းကိုရွာသားတွေကိုမနှိမ့်စက်ဘို့ဖုန်းဆက်ပြောကြောင်းသိရလို့မနှမ်စက်တော့ကြောင်း။ (21.3.18)ည(8)နာရီမှာမှာမောင်စိုးမြတ်အောင်ရဲ့စခန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးဆရာတော်နဲ့ရွားသာတွေအဖြစ်မှန်သိသွားပြီးဒေါသတွေထွက်တော့မှရဲတွေယောက်ယက်ခတ်ကုန်ကြောင်း၊သူတိုကိုလည်းရဲကလွတ်ပေးလိုက်ကြောင်း။ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းသေတ္တာကိုပြန်တွေ့တယ်လိုကြားရကြောင်းရွှေငွေတွေတော့ပြန်မရကြောင်းလဲကိုခင်မောင်လတ်ကပြောပြပါတယ်။ ဒေါင့်ချောင်းဆရာတော်ကဆေးရုံတက်ဆေးကုဘို့ဖုန်ဆက်ပြောပေးလိုလပွတ္တာ(3)မိုင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံနေရကြောင်းနားလည်းတဖက်မကြားရတော့ကြောင်းလက်တွေလဲပုံမှန်မြောက်မရတော့ကြောင်းထမင်းလည်းကောင်းကောင်းဝါးမရကြောင်းပြောပြရှာပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့တစ်နေ့တစ်နေ့လူကြီးတွေစုံအောင်လာတွေ့နေကြောင်းဘယ်သူတွေမှန်းလဲမသိကြောင်းကိုခင်မောင်လတ်ကပြောပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်ပြည်သူတို့၏ရပ်ရွာအေးခြမ်းသာယာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အတွက်အားအထားရဆုံးမဏ္ဍိုင်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဖြစ်ပါသည်။သိန်းချီရှိသောရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်၍စနစ်တစ်ကျလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေရဲတပ်ဖွဲကိုနစ်နာစေသည့်ကိစ္စကြီးများလည်းကြုံတွေရမြဲဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့အယုံအကြည်မပျက်စေရန်တိတိကျကျဖြေရှင်းရန်သာလိုပါသည်။ ဇော်ရမ်း(88 ကျောင်းသားဟောင်း) …